Featured – စာမကျြနှာ9– Healthy Life Journal
————-၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊————- အမျိုးသမီးအများစုဟာ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးထက်ဝက်နီးပါးဟာ ကလေးတွေ မူကြိုကျောင်းမပို့ခင်မှာကို လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သင်နဲ့ သင့်မိသားစု အဆင်ပြေပြေ လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း သင့်အနေနဲ့ သင့်ကလေးကို...
လူအများမျှော်လင့်မထားဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့် အရာများနှင့် ဖြေလျှော့နည်းများ
————–၊ ဇွန် ၊————— စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့ ဆိုလိုက်ရင် လူအများစုက အလုပ်အကိုင်၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ မိသားစု၊ ကျန်းမာရေး စတာတွေကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကြတယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီအရာတွေက စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပုန်းလျိုးကွယ်လျိုးနဲ့ ကိုယ်ထင်မှတ်မထားဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုပေးနေတဲ့ အရာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။...
အသက် ၃၅ ကျော် အရွယ်တို့အတွက် အာဟာရ
————–၊ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊————— အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က မျှခြေတွေ အနည်းငယ်မညီညွတ်တာတွေအပြင် ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေကလည်း အနည်းငယ်ချို့ယွင်းလာပါပြီ။ အသက် ၅၀-၆၀ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ ငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကတည်းက ကျန်းမာရေးမလိုက်စားခဲ့လို့ အခြေခံဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ရောဂါတွေက ဒီအရွယ်မှာ ပိုသိသာလာစေပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ...
နားအကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သည့် ထိပ်တန်းအကြောင်းရင်းများ
——–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——– အောက်ပါအကြောင်းရင်းတွေဟာ နားအကြားအာရုံထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (၁) ဆူညံသံများသောလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်း အဆက်မပြတ်ကျယ်လောင်တဲ့ ဆူညံသံကို ရေရှည်ကြားရတာကြောင့် အကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များဆုံး ထိခိုက်မှုက လုပ်ငန်းခွင်ဆူညံသံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံ၊...
ပလတ်စတစ်ထဲထည့်ထားသည့် အစားအသောက်များစားခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. အစားအသောက်တွေကို ပလတ်စတစ်အိတ်တွေထဲ ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းစားသောက်တာက ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလဲဆရာ။ A. အခုနောက်ပိုင်း ပလတ်စတစ်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လည်း မကောင်းသလို စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ မကောင်းဘူးဆိုတာ လူအတော်များများ သိရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သေချာလိုက်နာမှုကတော့...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေ ကိုတာက သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဂိုးကို့စ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့တော်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားတာ မကြာသေးဘူး။ သူ့အိမ်ကို အလည်လာပါဦးဆိုလို့ တစ်နေ့မှာ စာရေးသူရောက်ရှိသွားပါတယ်။ “ခင်ဗျားအိမ်ကိုရှာရတာ မလွယ်ပါလားကိုတာ” “ဂျီပီအက်စ်မသုံးဘူးလား” “သုံးတာပါပဲ။ တစ်နေရာမှာ အကွေ့မှားသွားလို့ တစ်ပတ်လည်သွားတယ်။...